किन हुन्छ निद्रामा गडबडी ?
किन हुन्छ निद्रामा गडबडी ? चाडबाडमा रातदिन जुवातास खेल्ने र अल्कोहल लिँदा निम्तिने समस्या
नेपाल लाइभ बुधबार, असोज २२, २०७६, १०:०५
दसैँ–तिहार वा विवाह–ब्रतबन्धजस्ता कार्यक्रममा धेरै काम हुँदा निद्रा गडबडी हुन्छ। तर, दसैँ र तिहारमा हुने समस्या अलि भिन्नै हुन्छ। कामबाट छुट्टी मिल्छ, अफिस बिदा हुन्छ। दसैँँको समयमा त हो नि मनोरञ्जन लिने भनेर मानिसहरु लामो समय तास खेल्ने, मदिरा सेवन गर्ने, धेरै मासु, खाना खाने तर पूरा समय नसुत्ने गर्छन्। कति औषधि सेवन गरिरहेका मानिस यस्तै कुरामा व्यस्त हुँदा औषधि सेवन गर्न समेत बिर्सन्छन्। त्यसले पछि स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउन सक्छ।
केही दिन त हो भन्दै लापरबाही गरेर पूरा समय नसुत्दा शारीरिक र मानसिक समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसैले जुनसुकै समयमा पनि शरीरलाई आवश्यक पर्ने निद्रा पूरा गर्नुपर्छ। के कारणले निद्रा गडबडी हुन्छ, त्यसले कस्तो असर निम्त्याउँछ भन्ने विषयमा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा रितेश थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित :
हाम्रो शरीरमा विभिन्न अंग छन्। सबैको आफ्नै काम छन्। त्यसमध्ये मस्तिष्कको एउटा प्रमुख काम हो निद्रा। मानिसको वृत्तिविकासमा निद्राको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उमेरअनुसार मानिसको सुत्नुपर्ने समय फरक हुन्छ। बच्चाहरु धेरै समय सुत्छन्। उमेर बढ्दै जाँदा निद्राको समय घट्दै जान्छ। सामान्यतयाः मानिसलाई ६ देखि ७ घण्टा सुत्नैपर्छ। रात्रिकालीन काम गर्ने मानिसहरु दिउँसो सुत्छन्। सामान्य अवस्थाबाहेक मानिस कम सुत्छ वा चाहिनेभन्दा बढी अवधि सुत्छ भने त्यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन्।
निद्रा नलाग्नुका पनि विभिन्न कारण हुन्छन्।
निद्रामा गडबडी भएमा टाउको दुख्ने, बिहान फ्रेस अनुभव नहुने, दिनभर अल्छी लाग्ने, जीउ भारी भएर आउने, स्मरण शक्ति घट्दै जाने, कुनै पनि काममा एकाग्रपन नहुने, खान मन नलाग्ने जस्ता समस्या देखिँदै जान्छन्।
बच्चाहरु ठूलो मानिसभन्दा धेरै समय निदाउनुपर्छ। बच्चा राति र दिउँसो सुतेन, धेरै चकचक ग¥यो वा आमाबाबुलाई धेरै सताउने भयो भने चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सोच्नुपर्छ, केही समस्या छ कि भनेर।
कसैलाई डिप्रेसनका कारणले निद्रा पर्दैन। डिप्रेसनले जाँगर नचल्ने, ओछ्यानमा पल्टिरहन मन लाग्ने, बढी सुत्ने, आलस्य हुने लक्षण देखिन्छ। अल्कोहल सेवनका कारणले पनि निद्रामा असर पर्छ।
निद्रा गडबडी हुँदा मनोवैज्ञानिक र शारीरिक समस्या बढ्छ। निद्रामा गडबडी भएमा टाउको दुख्ने, बिहान फ्रेस अनुभव नहुने, दिनभर अल्छी लाग्ने, जीउ भारी भएर आउने, स्मरण शक्ति घट्दै जाने, कुनै पनि काममा एकाग्रपन नहुने, खान मन नलाग्ने, जस्ता समस्या देखिँदै जान्छन्। स्टे«स बढ्दै गएपछि दिमागले पनि नियमित काम गर्न सक्दैन।
केही दिनअघि एकजना बिरामी आउनुभएको थियो। उहाँलाई दुई वर्षदेखि निद्रा नपर्ने समस्या रहेछ। लामो समय हुँदा किन जाँच गराउनु भएन भन्दा आफैं ठिक होला भनेर नआएको भन्नुभयो। पछिल्लो समय अन्य समस्या देखिन थालेपछि आउनुभएको रहेछ। उहाँलाई अन्य केही समस्या थिएन। निद्रासम्बन्धी नै समस्या थियो। निद्रासम्बन्धी समस्या भएकाहरुका लागि स्लिप हाइजिन मेन्टेन गर्न पनि सकिन्छ।
लामो समयदेखि निद्रा परेको छैन भने
तपाईं एक÷दुई दिन मात्र निद्रा नलाग्दैमा अस्पताल आइपुग्नु पर्दैन। लामो समयदेखि निद्रा परेको छैन, जसले नियमित प्रक्रियामा असर परेको छ, समस्या बढ्दै गएको छ भने एकपटक जाँच गराउनुपर्छ। नियमितभन्दा चाँडो निद्रा लाग्ने, छट्पटी हुने, निदाउन गाह्रो हुने वा निदाएपछि फेरि ब्युझिहाल्ने, रीस उठ्ने, टाउको दुख्ने र जीउ भारी हुने जस्ता समस्या भएमा चिकित्सकको सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ।